GỤỌ NKE Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Latvian Lithuanian Portuguese Romanian Russian Setswana Sinhala Slovak Slovenian Swahili Turkish Ukrainian
“ỊBỊA n’azụ oge bụ nsogbu e ji mara ndị bụ́ ọga kpata kpata,” ka akwụkwọ akụkọ bụ́ USA Today na-akọ. “Ha na-abịa n’azụ oge ná nzukọ isii n’ime nzukọ 10 ọ bụla,” ka ọ na-agbakwụnye, na-ezo aka ná nnyocha e mere n’ebe ndị ọga kpata kpata dị 2,700 nọ.
N’ógbè achụmnta ego, a dịghị ele ịbịa n’azụ oge anya dị ka àgwà ọjọọ nanị. N’otu nnyocha e mere n’ebe mmadụ 81,000 tinyere akwụkwọ maka iwe ha n’ọrụ nọ, e kwubiri, sị: “Awa ndị na-efunụ n’ihi ịbịa n’azụ oge nakwa ịhapụ ọrụ n’anataghị ikike bụ isi ihe na-akpata mfu ego.” Otú ọ dị, ọ bụghị nanị n’ógbè achụmnta ego ka ịbịa n’azụ oge na-akpata nsogbu. Nnyocha e mere n’ebe ndị isi ụlọ akwụkwọ sekọndrị nọ, gosiri na “ụmụ akwụkwọ ịbịa akwụkwọ n’azụ oge bụ isi ihe na-akpatakarị inye ha ntaramahụhụ mgbe mgbe.”
Onye Okike anyị chọrọ ka anyị jiri oge kpọrọ ihe. O kere “ihe ukwu abụọ ahụ nke na-enye ìhè”—anyanwụ na ọnwa—iji nyere anyị aka ịgụ oge. (Jenesis 1:14-16) N’ụbọchị ndị a, elekere ọgbara ọhụrụ ndị e nwere na-eme ka anyị nwee ike ịgụ oge anyị na minit nakwa na sekọnd. Otú ọ dị, n’agbanyeghị nkà na ụzụ, ọtụtụ n’ime anyị ka nwere nsogbu ịbịa n’oge—n’ọrụ, n’ụlọ akwụkwọ, ma ọ bụ n’àgbà ndị ọzọ dị mkpa.
Ihe na-akpata nsogbu ahụ ọ̀ bụ enwechaghị oge? N’eziokwu, oge a na-etinye n’ọrụ nakwa n’ezinụlọ pụrụ iri anyị ọnụ. Ka ọ sina dị, otu nne na-arụ ọrụ Bekee aha ya bụ Wanda Rosseland na-ekwu, sị: “Akwụsịrị m ime mkpesa banyere enweghị oge zuru ezu mgbe m chọpụtara na anyị nile nwechara awa 24 n’ụbọchị. Echewo m banyere ya ma kwubie na n’ụwa nke oge anyị a, ọ bụghị na anyị nwere oge dị nnọọ nta, kama anyị nwere nnọọ ọtụtụ ihe ndị na-egbochi anyị ọrụ nakwa ihe ndị na-adọpụ uche.”
Tụleekwa ihe banyere Renee, * nne nke ụmụ ise, onye bụ́ otu n’ime Ndịàmà Jehova. Ọ na-echeta, sị: “Mgbe ụmụ m dị obere, ịkwadebe ha maka ịga akwụkwọ na nzukọ Ndị Kraịst bụụrụ m ihe ịma aka. N’agbanyeghị nke ahụ, ọ dịghị nsogbu m na-enwe n’ịbịa n’oge. Ma ugbu a ha nile mecharala okenye, azụlitewo m àgwà ọjọọ nke ịbịa n’azụ oge.” Gị onwe gị ì nwere àgwà ọjọọ a? Ọ bụrụ otú ahụ́, ọ pụrụ ikwe gị omume ịgbanwe! Lee ụfọdụ ihe ndị ị pụrụ ime.
● CHEE BANYERE IHE NDỊ Ọ PỤRỤ ỊKPATA. Àgwà nke ịbịa n’azụ oge mgbe mgbe pụrụ iyi obere ihe. Ma tụlee okwu Bible a: “Ijiji nwụrụ anwụ na-eme ka mmanụ onye na-asụgwa mmanụ otite nke na-esi ísì ụtọ sie ísì ọjọọ, reekwa ure: otú a ka nzuzu nta dị arọ karịa amamihe, karịakwa nsọpụrụ.” (Eklisiastis 10:1) Ee, nanị “nzuzu nta” n’ụdị nke echebaraghị ndị ọzọ echiche pụrụ imebi aha ọma gị n’ebe onye nkụzi ma ọ bụ onye were gị n’ọrụ nọ.
Mgbe ọ na-amụ otu ihe ọmụmụ na mahadum dị n’ógbè ya, otu nwanyị aha ya bụ Marie chọpụtara na ụfọdụ ụmụ klas ya “anaghị eji oge akpọrọ ihe,” ha na-abịakarị klas n’azụ oge. “Ma ọ dịghị anya tupu ha agbanwee,” ka ọ na-echeta. “Mmadụ abụọ n’ime ndị prọfesọ anyị na-eji nnọọ oge akpọrọ ihe. N’ihi ya, ọ bụrụ na ọ dị ụmụ akwụkwọ ndị ji minit ole na ole bịa n’azụ oge, ndị prọfesọ ahụ na-ede aha ha dị ka ndị na-abịaghị akwụkwọ. Ha na-akwatukwa ndị na-abịaghị akwụkwọ ọtụtụ ugboro n’ule.”
Ịbịakarị n’azụ oge pụkwara imebi aha ọma gị n’ebe ndị enyi na ndị ọgbọ gị nọ. Otu nwoke katatụrụ ahụ́ aha ya bụ Josef na-echeta banyere otu Onye Kraịst ibe ya ọ maara ọtụtụ iri afọ gara aga. Ọ bụ ezie na a na-akwanyere nwoke a ùgwù n’ihi nkà izi ihe o nwere dị ka onye ozizi, o nwere àgwà na-emechu ihu. “Ọ na-abịakarị n’azụ oge,” ka Josef na-echeta. “Ihe m na-ekwu bụ na ọ na-abịakarị n’azụ oge n’ihe nile! O yikwara ka ọ dịghị echegbu onwe ya banyere ya. Ndị mmadụ na-eji ịbịa n’azụ oge ya eme ihe ọchị.” Ndị mmadụ, hà amalitela ịrụ gị aka dị ka onye na-abịakarị n’azụ oge? Ọ bụrụ otú ahụ, ọ pụrụ ịdịrị ha mfe ileghara àgwà ọma ndị i nwere anya.
● NA-ECHEBARA NDỊ ỌZỌ ECHICHE. Ịbịa n’azụ oge bụ àgwà ọjọọ, ọ na-adọpụkwa uche ndị ọzọ. Ọ pụkwara inye echiche na ị na-eche na ị ka ndị ọzọ elu. N’ịkọwa ihe kpatara ọtụtụ ndị ọga kpata kpata n’ógbè achụmnta ego ji abịakarị nzukọ n’azụ oge, otu onye ọchụ ntá ego kwuru, sị: “Ihe ka ọtụtụ n’ime anyị dị nnọọ mpako.” N’ụzọ dị iche na nke a, Ndị Kraịst na-emeso ndị ọzọ omume dị ka ndị ka ha onwe ha. (Ndị Filipaị 2:3) Ha na-ejikwa Ụkpụrụ Ọma ahụ eme ihe ma na-emeso ndị ọzọ omume otú ha ga-achọ ka a na-emeso ha. (Matiu 7:12) Ahụ́ ọ̀ naghị agbakasị gị mgbe ị na-echere ndị ọzọ? Ya mere, emela ihe ndị ọzọ ga-eji na-eche gị.
● MỤTA NKÀ NKE ỊHAZI OGE NKE ỌMA. Ị̀ na-eyigharịkarị ihe ma na-agbagharịzi mgbe oge gachawarala? Ị̀ na-enye onwe gị ọrụ karịrị akarị, na-anwa ime ọtụtụ ihe n’oge dị nnọọ nta? Ụkpụrụ ahụ dị n’Eklisiastis 3:1 pụrụ inyere gị aka: “Ihe ọ bụla nwere oge.” Ihe ọ bụla inwe “oge” na-enye gị ohere ime ha n’ụzọ dị n’usoro.
Nke mbụ, depụtasịa ihe nile ọ dị mkpa ka i mee. Nke abụọ, gbasoo ụkpụrụ ahụ dị ná Ndị Filipaị 1:10: “Jide ihe ndị ka mkpa n’aka.” Ee, na-ebute ihe ndị ka mkpa ụzọ. Olee ihe ndị ọ dị nnọọ mkpa ka e mee? Olee ihe ụfọdụ na-agaghị emebi ihe a pụrụ ime mgbe e mesiri? N’ikpeazụ, gbakọọ oge ọ ga-ewe gị iji mee ha na mgbe ị pụrụ ime ha. Jiri ezi uche na-eme ihe, ma na-ezere ime atụmatụ ime ọtụtụ ihe n’oge dị nnọọ nta.
Otu nwanyị aha ya bụ Dorothy kwuru na ọ bụ ndị mụrụ ya kụziiri ya iji oge eme ihe. Ọ na-akọ, sị: “Ọ bụrụ na anyị ga-anọ ná nzukọ Ndị Kraịst n’elekere 7:30 nke abalị, nne m na-amalite ịkwadebe anyị otu awa na minit 45 tupu oge ahụ eruo. Anyị na-enye oge maka iri nri abalị, ịsa efere, iyiri uwe, nakwa ịnyara ụgbọala gaa nzukọ. Ịbịa n’oge bịara mara anyị nnọọ ahụ́.” Mgbe ụfọdụ, ọ na-enye aka inye oge maka ihe ndị a na-atụghị anya ha. Dorothy na-echeta, sị: “Mgbe na-adịbeghị anya, m gawara iburu mmadụ ole na ole maka nzukọ. Ka m na-aga n’ụzọ, ụgbọala m dara afọ. Edozichara m ya ma g̣aruokwa n’oge iburu ha. Ana m ewepụtakarị oge maka nsogbu ụgbọala ma ọ bụ nsogbu agaghị ihu ma ọ bụ azụ nke ụgbọala.”
● GWA NDỊ ỌZỌ KA HA TỤỌRỌ GỊ ARO. Bible na-ekwu n’Ilu 27:17, sị: “Ígwè na-amụcha ígwè; otú a ka mmadụ na-amụcha ihu enyi ya.” N’ikwekọ n’ụkpụrụ ahụ, soro ndị ọzọ ọnọdụ ha yiri nke gị kwurịta okwu—bụ́ ndị na-ejisi ike abịa ihe n’oge. Mgbe mgbe, ha ga-enwe ọtụtụ aro ndị ga-abara gị uru.
Renee, bụ́ onye a kpọtụrụ aha ya ná mmalite, kpebisiri ike ịgbanwe àgwà ịbịa n’azụ oge ya. Ọ na-ekwu, sị: “N’oge na-adịbeghị anya, ekpebiri m ime nke ọma karị. Ọ bụ ezie na ọ dịbereghị m mfe, ana m enwe ụfọdụ ihe ịga nke ọma.” Gị onwe gị pụkwara ime otú ahụ. Site n’inwe àgwà ziri ezi na ime mgbalị siri ike, ị pụrụ ịmụta ịdị na-abịa n’oge!
^ par. 6 A gbanwewo ụfọdụ aha ndị ahụ.
Ịbịakarị n’azụ oge pụrụ inye gị aha ọjọọ n’ebe ndị were gị n’ọrụ nọ ma na-egosi na ị dịghị echebara ndị ọzọ echiche
Ịkpakọ onwe gị ọnụ nke ọma pụrụ inyere gị aka izere igbu oge
Gịnị Mere Anyị Ji Kwesị Ịna-abịa Ihe n’Oge?